ठूलो दलको हैसियतले निर्वाचन प्रक्रियाद्धारा मुख्यमन्त्री चयनगर्ने फोरम नेपालको निर्णय – Sanghiya Online
Posted on : February 4, 2018 - No Comment
धनुषा २०, माघ । संघीय समाजवादीफोरम नेपालले प्रदेश नं. २ को भावीमुख्यमन्त्रीनिर्वाचन प्रक्रियाद्धारा चयनगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा ठूलो दलको हैसियतले फोरम नेपालले मुख्यमन्त्रीचयनको प्रक्रियालाई औपचारिक ढंगले अघि बढाएको छ ।
चुनावअघि फोरम नेपाल र राजपाबीच गठबन्धन बन्ने बेलाभएको सहमतिअनुसार जो ठूलो दलहुन्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमतिभएको थियो । जसअनुसार स्वभाविक ढंगले फोरम नेपालले प्रदेश सरकारको नेतृत्वगर्नेगरी मुख्यमन्त्रीचयनको गृहकार्यलाई तीब्रतादिएको हो ।
जनकपुरस्थितफोरम नेपालको जिल्ला पार्टी कार्यालयमाशनिबार बसेको संसदीयदलको बैठकले मुख्यमन्त्रीचयनको लागितीन सदस्यीयनिर्वाचन समिति गठन गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्षएवं प्रदेश नं. २ कीप्रमुखरेणु यादव संयोजक र मुख्य सचिवशम्भु झातथासचिवशेषनारायण यादव सदस्य रहने गरी निर्वाचन समितिबनेको छ ।
फोरम नेपालका केन्द्रीयअध्यक्षउपेन्द्र यादवको उपस्थितिमाशनिबार गठित निर्वाचन समितिले भोलिआइतबारदेखि निर्वाचनप्रक्रियालाई अघि बढाउनेछ । यद्यपि, औपचारिक रुपमानिर्वाचनमा जानुअघि सर्वसम्मत ढंगले मुख्यमन्त्रीचयनको अधिकतमप्रयास जारी राख्ने सहमतिभएको फोरम नेपालकाप्रदेश सांसद सरोज सिंहले जानकारी दिए ।
सम्भवभए सर्वसम्मतनभएनिर्वाचनमार्फत् चयनहुने प्रदेशको संसदीयदलको नेता नै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदबार हुने प्रावधान छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारको नियमावली मस्यौदा समितिको लागि सरोज सिंह र चञ्चमायामोक्तानचयनभएका छन् ।
त्यस्तै, फोरम नेपालको नियमावली मस्यौदा तयारी समितिको संयोजकमा रामआशिसयादवतथा सदस्यमा सञ्जय यादव र पारस साहचुनिएका छन् । कार्यव्यवस्था समितिको लागि ज्ञानेन्द्र यादव र योगेन्द्र राययादवचयनभएका छन् ।
सुरेन्द्रको आक्रोस- दोस्रो अध्यक्ष भनेको उपाध्यक्ष बराबर हो, उसले कारवाही गरेर केहि हुँदैन
एमाले र माओबादीमा अध्यक्षको कुरा मिलेन, एकता सरकार निर्माणपछि मात्र, एकता नहुने संकेत